CHUG IMBWA INOBEREKA RUZIVO UYE MIFANANIDZO - IMBWA
Chug Imbwa Inobereka Ruzivo uye Mifananidzo
Chihuahua / Pug Musanganiswa Wemhando Dzembwa
'Benji the Chug pazera remakore matatu achiongorora Wales - takawana Benji semununuri ane mwedzi mishanu yekuberekwa. Kunyangwe kutanga kwake kwakaomarara kuhupenyu, haana kubvira aisa 'paw' zvisizvo! Tinoramba tichishamisika nenyaya yekuti ndiye imbwa diki yekutanga yatave nayo isina kumbosvibisa imba. Iyo inonyatso kujekesa chokwadi chekuti Chugs zvirokwazvo rudzi rwembwa iyo iri yakasarudzika inoda kufadza. Benji irwo rudzi rwakashata runoda kuwirirana uye rugare mumba . Anotsvaga kuva nesu pamukana wese, asi akabatsirwawo zvikuru kubva kune mumwe wake, Bella (a Chihuahua x Brussels Griffon ). Anoda kutamba naye dzimwe imbwa . Kunyangwe hazvo saizi yake diki uye makumbo mapfupi, ane shungu kwazvo kumhanya uye kuongorora pamusoro anofamba uye bhasikoro rinotasva nemumaruwa. '
Iyo Chug haisi imbwa chaiyo. Muchinjikwa pakati pe Chihuahua uye iyo Pug . Nzira yakanakisa yekuziva hunhu hwesanganiswa yakavhenganiswa ndeyekutarisa mhando dzese mumuchinjikwa uye uzive kuti iwe unogona kuwana chero musanganiswa wechero hunhu hunowanikwa mune chero rudzi. Haasi ese eaya akagadzika imbwa dzakauchikwa dziri kuberekwa dziri 50% dzakachena kusvika ku50% dzakachena. Zvakajairika kuti vafudzi vaberekane mizhinji-chizvarwa michinjikwa .
ACHC = American Canine Mbeu dzakauchikwa Kirabhu
DBR = Mugadziri Wekubereka Rejista
DDKC = Mugadziri Imbwa Kennel Kirabhu
IDCR = Wepasi rose Dhizaini Canine Registry®
American Canine Mbeu dzakauchikwa Club = Chug
Mugadziri Anobereka Registry = Chug
Dhizaini Imbwa Kennel Kirabhu = Chug
International Dhizaini Canine Registry®= Chugg
'Uyu 1 gore redu Chug, Miki Lee. Isu takangomutora uye iye akakosha uye akasindimara. Anoda munhu wese. Asi haafarire mufananidzo wake wakatorwa. '
Loki the Chug pazera remakore manomwe- 'Takanunura Loki paakanga aine makore gumi nemasere. Ane hunhu chaihwo hwePuggish. Isu tinoseka kuti achangobva kugona simba. Anogona kutarira pasi uye chikafu zvinoshamisa kusvetuka kubva pakaunda kuenda kunzvimbo yaakatarisa. '
Mhiripiri shava ine nhema Chug pazera regore— 'Pepper mudiwa akazara uye anokwatira bug. Anoda kutsvedza uye ane hushamwari uye ane rudo. Iye akanaka nevana vadiki uye haatomboita hasha kwavari. Asi pa imbwa paki iye akazvimiririra uye anotenderera senge iye ane yake nzvimbo. Huru yake yakapfava uye haidonhedze zvakawanda uye haana yap, asi ane mazino akabuda. Iye ane 10 lbs erudo uye isu tiri kufara kwazvo kuva naye mumhuri yedu. '
Tank iyo Chihuahua / Pug sanganisa mhando imbwa (Chug)
'Uyu ndiye Chug Cletus aka' bubbie wedu. ' Ane makore maviri mumufananidzo uyu. Baba vake is fug Pug uye amai vake, kirimu Chihuahua. Anotamba chaizvo uye anoda kugara pasofa newe uye kuona TV !! Isu takamupa teddy bere patakatanga kumuunza kumba uye achiri kurara nayo husiku hwega hwega mukrate yake. Cletus anoda mahombekombe. Iye anonyatsoda kumhanya nekutamba (uye kuchera) mujecha. Iye ukuru hwePug, ingangoita makumi maviri emabhiza. Ane hushamwari chaizvo uye anoda vana. Tine zvese katsi nembwa mumba medu uye anowirirana nemunhu wese. Cletus akangwara chaizvo-isu takamudzidzisa mamwe manomano uye anoda kuzviitira chero munhu anozotarisa (uye kumupa kurapa, hongu!). Takakomborerwa chaizvo kuva naCletus mumhuri medu !! '
Hudson mwana wemwedzi mitatu Chug puppy musanganiswa weiyo fug Pug uye shava-tsvuku Chihuahua.
LuLu weChihuahua / Pug musanganiswa (Chug) angangoita makore matatu ekuberekwa
Lucy weChihuahua / Pug musanganiswa (Chug)
Scooby the Pughuahua aka Chug (Pug / Chihuahua musanganiswa) ane makore maviri ekuberekwa - Muviri waScooby wakaumbwa kunge Chihuahua ane huma yePug.
Mugzie the Chug pazera remakore 1- 'Amai vake vaive vatema Pug uye baba vake vaive vatema uye vachena vane hurefu hurefu Chihuahua.'
Ona mimwe mienzaniso yeChug
Chug Mifananidzo 1
Chinyorwa chePug Sanganisa Yakarera Imbwa
Chinyorwa cheChihuahua Sanganisa Mbeu Dzakabereka
Yakasanganiswa Yekuberekesa Imbwa Ruzivo
Imbwa Diki vs. Pakati Pakati uye Huru Imbwa
wetsiva pitbull musanganiswa puppy mifananidzo
bhuruu pitbull american bulldog musanganiswa
tsvuku tick hound lab musanganiswa
basset hound boston terrier musanganiswa
Caucasian ovcharka hofori bere imbwa